क्यान महासंघमा नयाँ कार्यसमिति, को–को भए चयन ?::Nepaloutline.com
क्यान महासंघमा नयाँ कार्यसमिति, को–को भए चयन ?
काठमाडौं, १२ मंसिर । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघको तेह्रौं महाधिवेशन तथा २६औं साधारणसभा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ । मंसिर ७ गते सम्पन्न साधारणसभाले नवराज कुँवर नेतृत्वमा ४० सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । कुँवर प्रतिस्पर्धी सुनैना पाण्डेको भन्दा १२ प्रतिशत बढी ल्याएका छन् ।
डा.शेखर कोइरालाले आगामी महाधिवेशनमा सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने चर्चा
बुटवल, १२ फागुन । आगामी वर्षको फागुनमा प्रस्ताव गरिएको नेपाली काँग्रेसको १४ औँ...
चितवन, १२ फागुन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्यातमुखी अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्ने बताएका...
ट्रम्प भारतमा, प्रोटोकल तोडेर मोदीले गरे स्वागत
काठमाडौँ, १२ फागुन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो दुई दिने भ्रमणका क्रममा...
प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने चार विद्यार्थी पक्राउ
काठमाडौँ, १२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पोखरामा कालो झण्डा देखाउन खोज्ने...
काठमाडौँ, १२ फागुन । सरकारी कागजात किर्ते गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा ४...
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि भारतमा उच्च सुरक्षाको बन्दोबस्त गरेपछि सुरक्षा निकाय आगरामा...
काठमाडौँ, १२ फागुन । नेपाल टेलिभिजनका लागि ‘कि इन्टरटेन्टमेन्ट एण्ड रिसर्च प्रा.लि ले...
शनि हिन्दुस्थानीले ११ औ इन्डियन आइडलको ताज हात पार्न सफल
काठमाडौँ, १२ फागुन । भारतमा ६ महिना अघिबाट सुरु भएको इन्डियन आइडलको...